EVA / POE Solar Film Extrusion Line - Sina EVA / POE Solar Film Extrusion mpamatsy, Factory –Jwell
EVA / POE Solar Film Extrusion Line
Ny rafitra famahanana gravimetric mandeha ho azy dia manome antoka fa misy additives miiba sy ranon-javatra isan-karazany ary famahanana mazava tsara. Rafitra fanamafisana ny maripana ambany mba hahazoana antoka ny fifangaroana ao amin'ny toeran'ny fanaovana plastika mba hisorohana ireo additives mampifandray. Ny famolavolana manokana ny ampahany Casting dia manome ny vahaolana tonga lafatra amin'ny fametahana roller, ny fanapahana. Ny rafitra fanaraha-maso dia miantoka ny takelaka azo ampitaina mandritra ny fizotrany, ny fisintomana ary ny famolavolana ny rafitra.
Vokatra sakany (mm)
Hafainganana namboarina (m / min)